सैन्य बेसमै २० वर्षकी सैनिकको हत्याः अमेरिकी सेनाका १४ बरिष्ठ अधिकारी सस्पेन्ड ! – साँचो खबर
सैन्य बेसमै २० वर्षकी सैनिकको हत्याः अमेरिकी सेनाका १४ बरिष्ठ अधिकारी सस्पेन्ड !
काठमाडौं। अमेरिकी सेनाले आफ्ना १४ जना बरिष्ठ अधिकारीलाई सजाय दिइने घोषणा गरेको छ । टेक्सासमा रहेको सेनाको फोर्ट हुड बेसमा एक सैनिकको हत्या र अन्य केहीको मृत्युपछि भएको जाँचपछि सेनाले यस्तो घोषणा गरेको सीएनएनले जनाएको छ । सेनाका सेक्रेटरी रेयान म्याकर्थीले यो विषय सेनाको नेतृत्वको असफलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको बताएका छन् ।
‘मैले कमाण्डर र अन्य नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेको छु’ उनले भने । म्याकर्थीका अनुसार १४ जना बरिष्ठ अधिकारीहरुलाई पटबाट हटाइएको छ । एक अधिकारीका अनुसार यो कारवाही अमेरिकी सेनामा भएको सबैभन्दा ठूलो अनुशासनको कारवाहीमध्येको एक हो । सेनाको आन्तरिक अनुसन्धान अझै जारी छ र अगाडि थप अनुशासनको कारवाही समेत हुन सक्ने सम्भावना छ ।
फोर्ट हुडमा तैनाथ २० वर्षकी सैनिक वनीशा गुइलेनको शंकास्पद मृत्यु भएपछि स्वतन्त्र कनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो । अप्रिलमा बेपत्ता भएकी गुइलेनको शवको अवशेष जूनको अन्तिममा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रमम गुइलेनलाई हर्थाडाले हानेर मारेपछि हत्याराले उनको शव टाढा लगेर गाडेको र पछि हत्याराले पनि आत्महत्या गरेको खुलासा भएको थियो । गुइलेनको हत्या २० वर्षका स्पेसियालिस्ट आरोन डेभिड रबिन्सनले गरेको खुलासा भएको थियो जसले जुलाइ १ मा आत्महत्या गरेका थिए ।
‘स्पेसियालिस्ट वनीशा गुइलेनको हत्याले हामीलाई झट्का लागेको थियो र त्यहाँ गम्भीर समस्याहरु भएको खुलासा भएको थियो’ म्याकर्थीले भने ‘वनीशाको हत्याको अनुसन्धान गर्दै जाँदा फोर्ट हुडमा अन्य अपराध र मृत्युहरु पनि भएको खुलासा भयो । यसले हाम्रो नेतृत्वले पटक पटक गलत निर्णय गरेको र नेतृत्व असफल भएको समेत खुलासा भयो ।’ मंगलबाट पेश गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा फोर्ट हुडमा भएका समस्याहरुको विस्तृत विवरण उल्लेख छ । यहाँ सैन्य सेवाका ३७ हजार सदस्यसहित कूल ६० हजार जना बस्छन् ।
प्रतिवेदनमा शीर्ष जनरल र अन्य बरिष्ठ अधिकारीहरुले सैनिकको हितका लागि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको उल्लेख छ । फोर्टबाट बेपत्ता भएका सदस्यहरुको खोजीका लागि गरिने प्रयासका साथै यौन शोषण र यौन उत्पीडनमा परेकाहरुको केसको जाँच र कारवाहीको काम पनि राम्रोसँग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Previous: नौ महिनापछि भक्तजन प्रवेश गरे पशुपतिमा
Next: राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाऔं : तरुण दल